कोरोनाले सरकारी अयोग्यताको नकाव खोलिदियो : डम्बर बिक्रम कार्की « Niatra TV
कोरोनाले सरकारी अयोग्यताको नकाव खोलिदियो : डम्बर बिक्रम कार्की
काठमाण्डौं,जेठ ४ । नेपालमा २०७६ को माघ महिनाको पहिलो साता नै कोरोना संक्रमित व्यक्ति फेला परेको थियो। निजको स्वाब टेस्ट गर्न बिदेश पठाइएको थियो। उनी छिमेकी देश चिनबाट फर्किएका व्यक्ति थिए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि नेपाल कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा छ आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री र पर्याप्त खाद्य सामग्रीको जोहो गर्नु भनेर नेपाल सरकारलाई सचेत गराइरहेको थियो। नेपाली जनता र विषय विज्ञहरुले पनि कोरोना संक्रमणबाट बच्न आवश्यक प्रबन्ध गर्दै गर्नु है सरकार भनेका भन्यै थिए। तर सरकारले सुनेकै रहेनछ।अझ पर्यटन मन्त्री त कोरोना सहरमै पुगेर हाम्रो देश नेपाल कोरोना मुक्त छ। नेपाल भ्रमणको निम्तो छ भनेर निम्तो पो बाँड्दै थिए ।
जनताहरु सरकारलाई भन्दै थिए कि: सरकार! नेपाल आउन चाहने बिदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको उद्धार गरी क्वारेन्टिनमा राख र आवश्यक औषधोपचार गर। देशका प्रमुख शहरहरुमा रहेका नागरिकहरुलाई आ-आफ्नो घर पठाउने प्रबन्ध गर। अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर।सीमा क्षेत्र सिल्ड गर। दैनिक ज्यालादारी मजदुरको विवरण संकलन गरी खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य सामाग्री सहितको विशेष आर्थिक प्याकेजको प्रवन्ध गर।पर्याप्त खाद्य सामग्री तथा स्वास्थ्य सामाग्रीको भण्डारण र सर्वसुलभ तथा वितरणको व्यवस्था गर ।
कालाबजारी अन्त्य गर।तीनै तहको सरकारलाई सक्रिय बनाऊ। पर्याप्त क्वारेन्टिन र भेन्टीलेटर सहितको आइसोलेशनको व्यवस्था गर। बिरामी फर्काउने प्राइभेट हस्पिटललाई राष्ट्रियकरण गर। गैरकोभिड रोगको उपचार पनि सुचारु राख।यो कोरोना युद्धको अग्र मोर्चाका योद्धा मानिने स्वास्थ्यकर्मीहरु लगायत एम्बुलेन्स ड्राइभर र सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्तासहित पीपीई सहित अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराऊ। संचारकर्मीलाई पनि उक्त पीपीई उपलब्ध गराई अनिवार्य गराऊ। स्वास्थ्य सतर्कता र व्यक्तिगत दुरी कायम राखी महत्वपूर्ण औधिगिक क्षेत्र तथा व्यावसायिक क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा जनजीवन सामान्य पार। जनतालाई बजार जान रोक। अनलाइन सपिङ् र इ-बैकिङ्गको प्रवन्ध गर ।तत्काल आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने गरी विषय विज्ञहरुको कमाण्डमा यो कोरोना युद्ध हाँक। त्रास फैलाउने र नकारात्मक सन्देश दिने खाले समाचारमा रोक लगाऊ। हौसला बढाउने र सतर्कता बढाउने खाले सन्देश मात्र प्रशारण गर। राहत प्याकेज सहितको बजेट घोषणा गर ।
तर सरकारले जनता र विषय विज्ञहरुले दिएका माथि उल्लिखित राय,सल्लाह र सुझावलाई टेर पुच्छर लगाएन। बरु लकडाउनको आदेश नै यसको अचुक ओखती हो भनेको जसरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न छोडेर लकडाउनको अवधि बढाउन मात्रमै तल्लीन देखिन थाल्यो।
जान्नु न तान्नु आफैं सर्वविज्ञ बनेर एकपछि अर्को गलत निर्णय गर्दै जान थाल्यो। राहत वितरणका नाममा असुरक्षित भीड जम्मा गर्ने,उद्धारको नाममा असुरक्षित तवरले नागरिकको ओसारपसार गर्ने, अव्वहारिक तौर तरिकाले बिना परिक्षण सवारी पास उपलब्ध गराउने, आरडीटी जस्तो अविश्वसनीय कीटबाट टेस्ट गरी परीक्षणको दर बढेको बेतुकको घोषणा गर्ने, अति नै विश्वसनीय र भरपर्दो पीसीआर टेस्टको दायरा नबढाउने बरु कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सफल भइयो भनेर आत्मरतिमा रमाउन सरकार तल्लीन भयो।जनतालाई लकडाउनको डण्डा देखाउदै विपत्तिमै छोडेर सत्ता स्वार्थमा रमाउन थाल्यो। सरकारलाई त यो कोरोना अनि लकडाउन आफ्नो अयोग्यता लुकाउन रक्षा कवच नै सिद्ध भयो। हामी सर्वसाधारण जनताको लागि काल भयो।
परम्परागत एकान्त बास बस्ने ठाउँ( Isolation cabin) लाई अझ व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न बनाउँनुको सट्टा उल्टै छाउपडी प्रथाको उन्मूलनको नाममा भत्काउँदै डलर पचाउँदै जाने दुष्टहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल( Teaching Hospital) महाराजगञ्जलाई उहिल्यै अव्यवस्थित कसाइखानामा रूपान्तरित गरिसकेका रहेछन् ।
बाहिर बाहिर जनतालाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउँन लकडाउन गरिएको भनिएको थियो। तर भित्र भित्रै माफियाहरुको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्ने मात्र होइन कुर्सी जोगाउन विकृत र कुरुप तरिकाले घिनलाग्दो राजनीतिक खेल खेलिंदै थियो। जनताको ज्यान बचाउन भनेर गरिएको लकडाउनको १ महिना १२ दिन बितेपछिको समयमा हस्पिटलमै सुत्केरी हुनुभएकी तपाईंलाई हस्पिटलले कोरोना परीक्षण गर्ने जरुरत नै ठानेनछ। ८०-८५% व्यक्तिमा कोरोनाको लक्षण नै नदेखिन पनि सक्छ भन्ने कुरा पनि बिर्सिएछन् क्यारे डाक्टर भनाउँदाहरुले। फेरि सुत्केरी,बृद्धबृद्धा र दीर्घरोगीहरु कोरोनाको उच्च जोखिममा हुन्छन् भन्ने पनि बिर्सिएछन् क्यारे। भीआईपीहरुलाई परीक्षण गर्ने त्यो पीसीआर नामको ठाँडो तपाईंको लागि उपयोग हुन सकेनछ। हामी सर्वसाधारण जनताको अनाहकमा ज्यान जाने रहेछ ।
प्रशव पीडालाई जितेर नयाँ जीवन पाउँन त सफल हुनुभएको रहेछ तर दुष्टहरुको अव्यवस्थित र असुरक्षित स्वास्थ्य सेवाको कारण कोरोनालाई जित्न सक्नु भएनछ।अन्त्यमा सायद निर्रथक लकडाउनको सिकार हुनुभएछ। यस्तै अव्यवस्थित लकडाउनकै सेरोफेरोमा नजाने अझै कति जनाको ज्यान जाने हो थाहा छैन। माफियाहरुको धनराशी बढ्दै गइरहेको छ। सामान्य जनताको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। पोषिलो चीज त परै जाओस् एक पेट रुखोसुखो खान पनि हम्मेहम्मे पर्दै गएको छ ।
अरू देशले आफ्ना नागरिकलाई लकडाउनको आदेश मात्र दिएका छैनन् विशेष राहत प्याकेज पनि दिएका छन्। ती देशमा रोगले मर्नु अलग्गै होला भोकले मर्नुपरेको छैन । यता हाम्रो सरकारले पनि लकडाउन त गरेको छ तर राहतको सट्टा आहत प्याकेज ल्याएको ल्यायैछ। सावित्री चालिसे बहिनी, तपाईं अहिले त एक्लै नवजात शीशुलाई र हामी सबैलाई छोडेर जानुभयो। तपाईंको बैकुण्ठमा बास होस्। तपाईंको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दछु । तपाईंले कालसँग जितेर यो धर्तीलाई छोडेर गएको ती ११ दिने नवजात शीशु पनि अस्वस्थ भएको सुनेको छु। उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु। साथै शोकाकुल सम्पूर्ण परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु । शोकलाई शक्तिमा बदल्ने उर्जा प्राप्त होस् ।
सावित्री बहिनी तपाईंको ज्यान कोरोनाको कारणले भन्दा पनि सरकारको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा भएको चरम् लापरबाहीका कारण गएकोमा कम्तीमा म चाहिँ प्रष्ट छु । तपाईं अहिले त एक्लै जानुभयो । सरकारी लापरबाही यस्तै भयो भने नजाने कतिले तपाईंलाई पछ्याउँनु पर्ने हो थाहा छैन । तपाईंको बैकुण्ठ यात्रामा कोरोनाकै कारण अरुले दिन साथ नपरोस् भन्ने प्रार्थना पनि गर्दछु ।
सरकारको निरर्थक लकडाउनले तपाईंलाई बचाउन सकेन।तर स्वास्थ्य सेवा चुस्त दुरुस्त भैदिएको भए पक्कै तपाईंको ज्यान बाँच्थ्यो । गर्भावस्थाको करिब अन्तिम चरणबाट गुज्रिरहनु भएकी तपाईंलाई कमजोर आर्थिक अबस्था वा यही लकडाउनको कारण आवश्यक पोषिलो खानेकुरा नै पो पर्याप्त थिएन कि ? वा अन्य कुनै कारणले शारीरिक कमजोरी बढ्दै गएको थियो कि थाहा भएन तर रोगप्रतिरोधी क्षमतामा ह्रास आउँदै गएको चाहिँ रहेछ र त कोरोनालाई जित्न असफल हुनुभयो । सायद तपाईंले पनि आफ्नो जस्तो पीडा अरुले भोग्न नपरोस् भनेर पक्कै भन्नुभयो होला देहान्त भन्दा अघि । म पनि अब तपाईंले जस्तो दु:ख र अभाव अरु कसैले पनि भोग्न नपरोस् भन्ने कामना गर्दछु ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नं ९, राम्चेकी सावित्री चालिसे बहिनीलाई हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।